CISA လေ့လာမှုပစ္စည်း – အဆိုပါ InfoSec စာမေးပွဲတွင် Crush
အဆိုပါ CISA အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရတဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစား? အခွင့်အလမ်းတွေကိုသင် CISA အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ဖြစ်စဉ်ကိုအပေါ်သုတသေနပွုင့်နေကြသည်. ဒါပေမယ့်အစီအစဉ်အပေါ်လာမည့်ဘာလဲ?
CISA အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ဤအကြံပြုချက်များကိုသင်ဂရုတစိုက်သင်၏နောက်ရွေ့လျားအောင်ကူညီဖို့ရည်ရွယ်နေကြပါတယ်. အကောင်းဆုံးကဒီထူးခြားတဲ့စာမေးပွဲတွင်ကိုင်တွယ်ပုံကိုရှာဖွေဖတ်ရှုခြင်းသိမ်းဆည်းထားပါ, ပထမဦးဆုံးအကြိမ်သွား dos နှင့် don'ts, အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကိုသင့်ရဲ့ခရီးတစ်လျှောက်သုံးစွဲဖို့!
စောင့်ဆိုင်းချင်မနေပါနဲ့? ယင်းနှင့်အတူစတင်ရန် အကောင်းဆုံး CISA လေ့လာမှုပစ္စည်းများ & ဤနေရာတွင်အထူးလျှော့စျေး.
အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦး CISA အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရ?
သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးစာရင်းစစ်လောကီသားတို့သည်အဆနှုန်းထားများမှာကြီးထွားလာသည်. သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးစာရင်းစစ်ဝယ်လိုအား year.With ပြီးနောက်ယေဘုယျအားဖြင့်လူအပေါင်းတို့သည်မကြာသေးမီအိုင်တီအတွက်အပြောင်းအလဲများနှင့်စီးပွားရေးတစ်နှစ်တိုးမြှင့်လိုက်ပါတယ်, CISA certified ရရှိထားပြီးပညာရှင်များများအတွက်အတိုင်းအတာတိုးမြှင့်ထားပါတယ်. ဤအပြောင်းအလဲများနှင့်ပို CISA စာမေးပွဲတွင်တက်ယူသစ်ကိုလုံခြုံရေးပညာရှင်များ၏အိမ်ရှင်အားပေးအားမြှောက်ကြသည်.
ကမ္ဘာတစ်လွှားအတော်များများကြီးမားသောငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဘဏ်များအထိရောက်ဆုံးလုံခြုံရေးအကဲဖြတ်သေချာစေရန် CISA certified ရရှိထားပြီးကိုယ်စားလှယ်လောင်းများငှားရမ်းစတင်ခဲ့ပါပြီ. ဤသည်လစာနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းသူကိုသူတို့အဘို့အလွန်ကြီးစွာသောသတင်းဘုတ်အဖွဲ့ကိုဖြတ်ပြီးမြင့်တက်လျက်ရှိသည်သမုတ်သော.
အဆိုပါ CISA စာမေးပွဲမည်သို့ခက်ခဲသည်?
ကျနော်တို့က CISA စာမေးပွဲတွင်ပတ်လည်အပြင်းထန်ဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုပြောသည့်အခါကျနော်တို့နောက်နေမဟုတ်ပါဘူး. ဒါဟာကြယ် pass-နှုန်းထားများထက်လျော့နည်းဘို့ကိုတောင်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားင်. အဆိုပါ ISACA နေစဉ်, (အရာရှိစာမေးပွဲကြီးကြပ်) မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းဖြတ်သန်း-နှုန်းထားများနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ဝြေခင်းရပ်တန့်ခဲ့ကြ, တုံ့ပြန်ချက်လျော့နည်းကိုယ်စားလှယ်လောင်း၏ထက်ဝက်ထက်လွန်သွားပြီးသောအကြံပြု. သင်သင်ပြုချင်သောနောက်ဆုံးအရာ CISA ကျရှုံးဖြစ်ပါတယ်င်လေ့လာနေထဲသို့သွင်းထားရှိသမျှကိုတနင်္ဂနွေနှင့်အချိန်ပြီးနောက်.
ထိပ်တန်း3သငျသညျအဆိုပါ CISA စာမေးပွဲမအောင်မြင်နိုင်အကြောင်းရင်းများ
အဆိုပါအာရုံလွတ်ကျက်နှင့် rote သင်ယူမှုအပေါ်ဖြစ်ပါသည်.
အဆိုပါ CISA တစ်ရောင်းချသူတိကျတဲ့စမ်းသပ်မဟုတ်ပါဘူး.
အဆိုပါ CISA စာမေးပွဲများအတွက်လေ့လာဖို့ကိုဘယ်လို?
ဤ CISA စာမေးပွဲတွင်အဘို့ပြင်ဆင်နေသည့်အခါစိတ်တွင်စောင့်ရှောက်ဖို့အရေးအပါဆုံးအကြံပေးချက်များများမှာ.
အဆိုပါ CISA အစစ်အမှန်ကမ္ဘာက applications များအပေါ်အလေးပေး, ဒါကြောင့်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးစာမေးပွဲဖြေဆို taker ဖြစ်ခြင်းကဒီမှာသင်ကူညီမည်မဟုတ်. သငျသညျစာရင်းစစ်များနှင့်စာရင်းကိုင်ကျွမ်းကျင်မှုသို့မဟုတ်အခြားသင်အိုင်တီထက်မြက်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်.
2. အဆိုပါအများစုမှာအရေးကြီး CISA လေ့လာမှုပစ္စည်းများ Read
သင်က ISACA ထံမှ CRM နှင့်အတူတစ်ဦးမေတ္တာအမုန်းကြားဆက်ဆံရေးရှိသည်လိမ့်မယ်. ဒါဟာအတိအကျစိတ်လှုပ်ရှားစရာမဟုတ်ပေမယ်ကအားလုံးကိုကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးပြည့်စုံလမ်းညွှန်င်. အဆိုပါ CRM ​​သင်စာမေးပွဲဖြေဖို့ဆက်စပ်လိုအပ်ပါတယ်အသေးစိတ်ရှိပါတယ်ပေါင်း IS စာရင်းစစ်များ၏အခန်းကဏ္ဍနှင့်တာဝန်များအဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်. သငျသညျရှောက်သွားချင်တယ်ဆိုရင်ဒါဟာအားလုံး CISA စာမေးပွဲတွင် takers များအတွက်လေ့လာမှုလမ်းညွှန်ရှိရမည်ရဲ့နှင့်သင်ပိုကောင်းစုံတွဲတစ်တွဲကြိမ်ထက်ပိုဖတ်ပါ.
3. CISA လေ့လာမှုအစီအစဉျ
သင့်ရဲ့လေ့လာမှုအချိန်စီစဉ်သင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုအရေးပါပါလိမ့်မည်. သငျသညျအပြည့်အဝအချိန်အလုပ်မလုပ်လျှင်သင်ပြင်ဆင်ထားရန်ကအနည်းဆုံးလအနည်းငယ်လိုပါလိမ့်မယ်. အနည်းဆုံးအားဘေးဖယ်ထား 1-2 နာရီထိုင်ဖို့ညဥ့်နှင့် CRAM.
အကြံပြု CISA လေ့လာမှု Times သတင်းစာ
45% Simulator / အလေ့အကျင့်စမ်းသပ်မှုအပေါ်
4. အဆိုပါအခမဲ့ CISA လေ့လာမှုပစ္စည်းများကိုသုံးပါ
အဆိုပါ ISACA သင်စတင်ရန်လိုအပ်သောအရာကိုအများကြီးရှိပါတယ်.
ISACA ကိုယ်စားလှယ်လောင်း Start ကိုလမ်းညွှန်
ISACA ရဲ့ CISA ကိုယ်ပိုင်အကဲဖြတ်ပဟေဠိ
သငျသညျမိတျဆှမြေားစေချင်ပါလိမ့်မယ်နဲ့ ASAP အိုင်တီလုံခြုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းရ. certified ရရှိထားပြီးဖြစ်လာရန်သင့်ခရီးအတွေ့အကြုံအပေါ်မှာလက်ရယူခြင်းကျိန်းသေသူအထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်. သငျသညျလိုအပ်သောစီးပွားရေးဖြစ်စဉ်များကောင်းတစ်ခုစိတ်ကူးရှိသည်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးစာရင်းစစ်ဘဏ္ဍာရေးနှင့်သယံဇာတစာရင်းစစ်ထံမှကွဲပြားခြားနားကြသည်. ယင်းအခန်းကဏ္ဍနှင့်တာဝန်များနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ကူညီပေးဖို့ LinkedIn သို့မဟုတ်အခြားလူမှုမီဒီယာဆိုဒ်များပေါ်ရှိအခြား CISA ပညာရှင်များထွက်ရှာကြလော့. ပိုကောင်းသေးသူတို့ ပို. ပင်အကြံပေးချက်များသို့မဟုတ်လှည့်ကွက်နှင့်တကွသင်ပေးနိုင်ပေမည်.
6. CISA သင်တန်းများ
အဲဒါကိုမှကြွလာသောအခါများစွာသောအကြီးအရွေးချယ်မှုရှိပါတယ် CISA prep သင်တန်းများ. သူတို့ကပုံမှန်အားဖြင့်အွန်လိုင်းကမ်းလှမ်းခဲ့သည်သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းအသက်ရှင်နေထိုင်နေကြတယ်. တစ်ခုချင်းစီကိုအယူအဆတစ်ခုကိုရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကောင်းအဆိုး cons ရှိပါတယ်. သငျသညျရှောက်သွားချင်တယ်ဆိုရင်ကျိန်းသေပင်ဝဘ်တလွှားရှိနိုင်ပါအခမဲ့ CISA လေ့လာမှုပစ္စည်းများအထက်နှင့်ကျော်လွန်ပြီးအနည်းဆုံးကောက်ချင်လိမ့်မယ်. အကောင်းဆုံး CISA သင်တန်းများအလေ့အကျင့်စာမေးပွဲများပါဝင်သည်, ဗီဒီယိုကပို့ချချက်, အများကြီးရဲ့အ MCQ ရဲ့နှင့်နည်းပြဆရာထောက်ခံမှု.
အဆိုပါ CISA လွယ်ကူသည်မဟုတ်ပေမယ့်, သငျ့လျြောသောစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်အတူ, ဆုံးဖြတ်ချက်, နှင့်လက်ျာလမ်းညွှန်မှု, သင့်ရဲ့ 1st ပါရက်နေ့တွင်စာမေးပွဲဖြေဆိုရှင်းလင်းကျိန်းသေဖြစ်နိုင်. သင်ဤဆောင်းပါးအတွက်တင်ဆက်သည့်အကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက်နောက်တော်သို့လိုက်သင်နှင့်သင်၏ထူးခြားတဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့စိတ်ကြိုက်လေ့လာမှုတစ်ခု-အစီအစဉ်ကိုဖန်တီးပြီးပြီဆိုပါက, စာမေးပွဲဖြတ်သန်းနီးပါးစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်.
အဆိုပါဘာတွေလဲ အကောင်းဆုံး CISA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းသင်တန်းများ 2018?
ကုမ္ပဏီ CISA SuperReview SimpliLearn CISA သင်တန်းအမှတ်စဥ် Gryfina CISA့Prep သင်တန်းအမှတ်စဥ် CISA ExamPractice
စျေးနှုန်း $600 $449
Show ကိုကူပွန် $347 $267 Show ကိုကူပွန် $599 $499
မေးခွန်းများ 900+ 79 1,650+ N / A
PRACTICE စာမေးပွဲဖြေဆို4အပြည့်အဝခြင်း simulation
စာမေးပွဲများကို5အပြည့်အဝခြင်း simulation
စာမေးပွဲများကို Unlimited N / A
ဗီဒီယိုလက်ချာ 30-40 hours 27 hours N / A 15 hours
Course ACCESS6လပေါင်းများစွာ6လပေါင်းများစွာ 12 လပေါင်းများစွာ6လပေါင်းများစွာ
အာမခံချက်6တစ်လတိုးချဲ့မှု
သငျသညျသှားမနေပါနဲ့လိုလျှင်3Day ကိုငွေရှာ-သို့ပြန်သွားရန်
အာမခံချက် ဖြတ်သွားသို့မဟုတ်ပြန်အမ်းငွေ အဘယ်သူမျှမ
Course UPDATE ခပ်သိမ်းသော6လပေါင်းများစွာ
& 40+ CPE Credit
အလကား DEMO အခုကြိုးစားကြည့်ပါ!
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း အပြည့်အဝပြန်လည်သုံးသပ်ချက် Read အပြည့်အဝပြန်လည်သုံးသပ်ချက် Read အပြည့်အဝပြန်လည်သုံးသပ်ချက် Read အပြည့်အဝပြန်လည်သုံးသပ်ချက် Read
ကို http://crushtheinfosecexams.com/wp-content/uploads/2015/09/InfoSec-Logo1-300x41.png00 ဂျိမ်း Edge ကို http://crushtheinfosecexams.com/wp-content/uploads/2015/09/InfoSec-Logo1-300x41.png ဂျိမ်း Edge2018-04-05 17:08:002018-03-02 17:21:38CISA သင်တန်းများ & လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး
ကို http://crushtheinfosecexams.com/wp-content/uploads/2015/09/InfoSec-Logo1-300x41.png00 ဂျိမ်း Edge ကို http://crushtheinfosecexams.com/wp-content/uploads/2015/09/InfoSec-Logo1-300x41.png ဂျိမ်း Edge2018-04-05 17:08:002018-03-02 17:24:40အကောင်းဆုံး CISA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းသင်တန်းများ
Surgent CISA Review ကျော်ရှိပါတယ် 20 years of experience under the Exam Matrix CISA brand and leads the CISA review industry in product development and innovative technology. Despite it’s new name this course has helped thousands of people pass the CISA exam over the years and if you want to remove all doubts about failing your exam then this is your best bet.
Surgent CISA Review software has an easy to use interface that makes it easy to track your progress in great detail. ဒါဟာသင့်ရဲ့တိကျတဲ့လိုအပ်ချက်တွေ caters တစ်စိတ်ကြိုက်လေ့လာချက်အစီအစဉ်ကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုထားသည့် "သပ္ပါယ်-သင်ယူမှုနည်းပညာကို" အသုံးချ. ဒီနည်းနဲ့သင့်အားနည်းဒေသများနှင့်သင်တို့အပေါ်မှာပိုပြီးအချိန်ဖြုန်းဖို့လိုအပ်သည့်အကြောင်းအရာများ identify ကိုကူညီခြင်းဟာအကောင်းဆုံး tool တစ်ခုဖြစ်သည်. ထိုဒေသများပေါ်တွင်သင်၏လေ့လာမှုတွေကအာရုံစူးစိုက်အားဖြင့်သင်တို့ကိုအများဆုံးလိုအပ်, သင်သည်သင်၏လေ့လာချက်အချိန်ပိုကောင်းအောင်နိုင်ကြသည်နှင့်ပိုမိုသောအချက်အလက်များကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်.
မိမိတို့အ software ကိုသင်အလွယ်တကူတိုးတက်မှုအစီရင်ခံစာကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့သူက built-in တစ်ခုအစီရင်ခံ function ကိုရှိပါတယ်, ရည်ညွှန်းကိုးကားအစီရင်ခံစာ, သို့မဟုတ်သင်၏နောက်ဆုံး session ကိုရဲ့ရလဒ်များကို. သင်ရှာနေတာပေါ်တွင် မူတည်. လည်းကောင်းအသေးစိတ်သို့မဟုတ်အကျဉ်းချုပ် format နဲ့များတွင်ဤအစီရင်ခံစာများအသီးအသီးကိုကြည့်ရှုဖို့ရှေးခယျြနိုငျ.
Their complete CISA review course comes equipped with over 1,650 မျိုးစုံရွေးချယ်မှုမေးခွန်းများကို. ပိုပြီးအလေ့အကျင့်မေးခွန်းတွေကအတူထွက်ရှိပါတယ်သင်တန်းများရှိပါသည်တောင်မှ, Surgent CISA prides themselves on having the most difficult and relevant ones, ယခင်စာမေးပွဲကနေတိုက်ရိုက်လာကြပြီအများအပြား. All questions come with detailed explanations most containalink to the page(့) in the book that covers the content relevant to that specific question.
သင်တန်းအမှတ်စဥ် Access ကိုအလေ့အကျင့်များနှင့်စာမေးပွဲများကို
The Surgent Certified Information Systems Auditor review course gives you 12 သူတို့ရဲ့အွန်လိုင်းပစ္စည်းကိုမှလအတွင်းလက်လှမ်းအဖြစ်န့်အသတ်အလေ့အကျင့်စာမေးပွဲများ. ဒါတွေဟာသင့်ရဲ့အမှန်တကယ်စာမေးပွဲဖြေဆိုနေ့၌သငျမွမည်ကွန်ပျူတာနည်းပညာစာမေးပွဲဖြေဆိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆင်တူယိုးမှားနှင့်အတူတူပင်ကိရိယာများနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပါဝင်သည်. ဒါဟာသင်အမှန်တကယ်သင့်ရဲ့စမ်းသပ်မှုစိုးရိမ်ပူပန်မှုလျှော့ချခြင်းနှင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုသင်တို့၏အဆင့်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုသည့်အခါယူဘို့သင့်ကိုပြင်ဆင်မည်ကူညီပေးပါမည်.
Surgent CISA Review guarantees that you will pass the CISA exam or they will refund your money. To find out about the details, select Pass or Refund Guarantee from their main menu bar’s “အကွောငျး” tab ကို down list ကို drop.
ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန် $70 တစ်ဦးသီးသန့် Crush လျှော့စျေးယနေ့နှင့်အတူ! Show ကိုကူပွန်
1. အလိုက်သင်ယူ Software များ
2. 1,650 အလေ့အကျင့်ရှိသောမေးခွန်းများ
3. 12 လပေါင်းများစွာ Access ကို
ကို http://crushtheinfosecexams.com/wp-content/uploads/2018/01/surgent-logo.png 73 194 ဂျိမ်း Edge ကို http://crushtheinfosecexams.com/wp-content/uploads/2015/09/InfoSec-Logo1-300x41.png ဂျိမ်း Edge2018-04-05 17:08:002018-03-22 10:32:03Surgent CISA Review Course Online
Gryfina CISA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Gryfina စမ်းသပ်ခြင်း့ Prep makesagreat CISA exam review course that is based on two main ideas: သပ္ပါယ်သင်ယူမှုနှင့်အနည်းငယ်မျှသာ. ရှင်းလင်းသောအခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အားဖြင့်, မည်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါ adapter နဲ့စိတ်ကြိုက်နည်းပညာနှင့်အတူ coupled, ဒီသင်တန်းရဲ့အရည်အသွေးပေါ်စွန့်ခြင်းမရှိဘဲပြိုင်ဘက်ထက်အများကြီးနိမ့်သောစျေးနှုန်းမှာပူဇော်သော.
The Gryfin CISA exam review course comes replete with 1,600+ အလေ့အကျင့်မေးခွန်းတွေက, 12 months of access, andanumber of other great features. Despite these great offerings, သို့သော်, the course is hundreds of dollars less than what is available from other test prep companies.
Basically, you take an assessment that comprises several sections of multiple choice questions. Then, based on your performance, the course engineersaspecific study plan for your needs—you essentially test out of certain topics. Gryfin’s adaptive learning platform generates questions based on your strengths and weaknesses, allowing you to improve upon areas with which you are struggling. တူညီတဲ့အဟောင်းပစ္စည်းများ-Gryfin လေ့လာနေပိုပြီးဟဿဖြစ်သွားသောအချိန်အဘယ်သူမျှမသင်သိရန်လိုအပ်သောအရာကိုပေါ်တွင်သင်၏သင်ယူမှုအလေးပေး, သင်သည်အဘယ်သို့ပြီးသားနားမလည်.
အချို့သောကုမ္ပဏီများသည်အာမခံချက်ဤအမျိုးအစားပူဇော်ဖို့တွန့်ဆုတ်စေခြင်းငှါနေစဉ်, Gryfin အပြည့်အဝက၎င်း၏ထုတ်ကုန်နောက်ကွယ်မှရပ်တည်. ဒီ pass သို့မဟုတ်ပြန်အမ်းငွေအာမခံချက်ပေးနိုင်မယ့်အဘယ်ကြောင့်ဤသူကားအ. သငျသညျအရည်အချင်းပြည့်မှီခဲ့လျှင်, သငျသညျကိုပြန်သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံရနိုင်ပါတယ်.
လည်း, သင်ရိတ်က္ခာ access ကိုကာလအတွင်းစာမေးပွဲပေမယ့်နေဆဲ Gryfin ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးသင်တန်းအသုံးမပြုချင်ကြပါလျှင်, you can sign back up for half price. This means that you’ll get an unparalleled amount of time to study forafraction of the price.
အဆိုပါ CISA prep ကမ်ဘာပျေါတှငျအခွားသောသင်တန်းများပေးလေ့ 5-6 months of access, တချို့အချိန်များများထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မယ်အရာ. Gryfin သင်အနည်းငယ်ပိုပြီးလှုပ်လှုပ်ရွရွအခန်းကိုပေးသည်, ယင်းအချိန်ကာလကုန်ဆုံးရှေ့မှာအသုံးပြုမှုတစ်ခုလုံးတစ်နှစ်ခွင့်ပြုပါတယ်အဖြစ်. သင်တစ်ဦးအလုပ်များအချိန်ဇယားရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်သင်ရိုးရှင်းစွာကျမ်းပိုဒ်ကိုသေချာစေရန်ကပိုလေ့လာနေတောင်းမည်ဆိုပါကသောအမျိုးအစားဆိုရင်, ဤသူသည်သင်တို့အဘို့အသင်တန်းဖြစ်ပါသည်!
အခြားသင်တန်းများသူတို့ရဲ့စျေးနှုန်းအချက်များအပြစ်လွတ်စေအပြည့်အဝခြင်း simulation စာမေးပွဲ၏အသုံးပြုမှုအပေါ်မှီခိုခြင်းငှါနေစဉ်, Gryfin’s offering provides you with more multiple choice questions—many more questions, တကယ်တော့! With more than 1,600 မျိုးစုံရွေးချယ်မှုမေးခွန်းများကို, it blows the competition out of the water. This is done so that potential test takers getachance to use the adaptive learning software and master every topic.
အလိုက်သင်ယူ Software များ
စျေးနှုန်းကို: $347 $267 Show ကိုကူပွန်
Includes: 12 months of access to full review course, ထက်ပိုပြီး 1,600 မျိုးစုံရွေးချယ်မှုမေးခွန်းများကို, adaptive learning software that adjusts to your strengths and weaknesses, expert-source questions,apass or refund guarantee, customizable study plans, easy-to-use dashboard and layout, and so much more.
ကို http://crushtheinfosecexams.com/wp-content/uploads/2017/03/Gryfin-Logo-Text.png 500 500 ဂျိမ်း Edge ကို http://crushtheinfosecexams.com/wp-content/uploads/2015/09/InfoSec-Logo1-300x41.png ဂျိမ်း Edge2018-04-05 17:08:002018-01-10 22:00:00Gryfina CISA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အကောင်းဆုံး CISA လေ့လာမှုပစ္စည်းများ 2018
April 5, 2018 /3 မှတ်ချက်များ/အားဖြင့် ဂျိမ်း Edge
ကို http://crushtheinfosecexams.com/wp-content/uploads/2017/01/CISA-Large.png 500 750 ဂျိမ်း Edge ကို http://crushtheinfosecexams.com/wp-content/uploads/2015/09/InfoSec-Logo1-300x41.png ဂျိမ်း Edge2018-04-05 17:08:002018-04-24 18:29:04အကောင်းဆုံး CISA လေ့လာမှုပစ္စည်းများ 2018
CISA SuperReview Allen က Keel အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့တာ, သူကိုလက်ျာဘက်ကသူ့သင်တန်း၏ပထမဦးဆုံး module တစ်ခုကနေ CISA စာမေးပွဲတွင်အကြောင်းကိုအဖြစ်အလွန်တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ကိုဖြတ်ပြီးလာ. Allen ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ချုံစမ်းသပ်ပစ္စည်းကိုရှင်းပြနိုင်သူသည်ဆရာသည်ကြီး.
CISA စူပါဆန်းစစ်ခြင်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်လိုအပ်ပါတယ် 30-40 ဖြည့်စွက်ရန်လေ့လာမှု၏နာရီပေါင်း, ထိုသို့ကျော်ပါဝင်သည် 600 အဓိက slide များ. ဒါ့အပြင်ကျော်ပါဝင်သည် 890 အလေ့အကျင့်မေးခွန်းတွေက, အားလုံးကိုဖုံးလွှမ်းထားတဲ့5စာမေးပွဲပေါ်တွင် CISA domains များ၏.
Each lesson withinamodule begins withapre-assessment test and finishes withapost-assessment test. ထို့အပြင်, အသီးအသီး module ကိုကြောင်း module ကိုကနေအပေါငျးတို့သအလေ့အကျင့်မေးခွန်းတွေကပါဝငျသောစမ်းသပ်မှုတစ်ခုနှင့်အတူပြီးသွား. အဆိုပါ CISA က Super ဆန်းစစ်ခြင်းအဝတ်မခြုံဘဲထွက်ခွာသွားခြင်းမရှိမြေပြင်ကိုအရွက်.
အဆိုပါသင်တန်းကိုလည်းပါဝင်ပါသည်4timed practice exams which contain 200 ကျပန်းရွေးချယ်ထားမေးခွန်းတွေကအသီးအသီး. This is the same format as the actual CISA exam and will help you get comfortable answering so many questions while your on the clock. This truly isaCISA exam prep on steroids!
ပစ္စည်းတွေအများကြီးကိုဒီသင်တန်းကိုဖွင့်ရှိနေပါသည်, သောကကျိန်းသေရဲ့ content ၏ interface နဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုအလွန်ရိုးရှင်းသောအသုံးပြုရလွယ်ကူကြောင်းဖော်ပြရကျိုးနပ်မယ့်ဆိုလိုတယ်. ဒီတော့ကိုမဆိုသင်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အချိန်အနည်းဆုံး access ရန်လိုအပ်ပါတယ်သင်တန်း၏အစိတ်အပိုင်း, you are always justaclick away. သင်တို့ကိုရှာတွေ့ဖို့လိုပါတယ်ဘာကိုအချက်အလက်၏စည်းကမ်းချက်များ၌တကယ့်ကိုဆင်းကျဉ်းမြောင်းဖို့လိုအပ်သည့်အခါထိုကာလများအတွက် search function များအားလည်းရှိပါတယ်.
CISA က Super ဆန်းစစ်ခြင်းသင်ပယ်ရှင်း left ဘယ်မှာအောက်မေ့ထားတဲ့အော်တို bookmark ကို function ကိုရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်ကရဲ့ login ပြီးနောက်ထိုသို့ရှာဖွေဖို့ရန်မလိုဘဲသင်တန်းဖွင့်ပိုင်ခွင့်အမှတ်မှာပြန်လည်စတင်နိုင်ပါ. This course can be accessed from any computer, ကမ်ဘာ​​ပျေါတှငျဘယ်နေရာမှာမဆို, မည်သည့်အချိန်တွင်မ.
ဒီသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းဆုံးအရာသော်လည်းစာရေးဆရာရဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်ပြုလုပ်၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်သူဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့လျင်မြန်စွာကျောင်းသားများကမေးခွန်းတွေရဲ့အပြန်ဖြေတယ်လမ်းဖြစ်၏. သူကတစ်နှစ်နှစ်ကြိမ်သင်တန်းကို update, သင် CISA စာမေးပွဲဖြေဆိုပစ္စည်းကိုအခြိနျမှနျမှနောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်ကြောင်းဆင်ခြင်သောအခါအထူးအရေးကြီးသည်ဟူသောဖြစ်ပါသည်. All the updates to this course include those exam modifications.
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, Allen က (ရေးသားသူ) customer support ကိုမှာထိပ်တန်းဖြစ်ပါတယ်. သူကသူ့ပစ္စည်းကိုအရာအားလုံးစူပါရှင်းရှင်းလင်းလင်းစေသည်ပေမယ့်အသိအမှတ်ပြု, သငျသညျအတော်လေးထွက်ရာတစ်ခုခုတွက်ဆမရနိုငျသောအခါနေဆဲကြိမ်ရှိလိမ့်မည်, သူသည်သင်တို့အနည်းငယ်တိုတောင်းနာ​​ရီအတွင်းအဖြေများကိုပေးစေခြင်းငှါလက်ပေါ်မှာရှိပါလိမ့်မယ်သောအခါ, ဤသူကား.
သင်သည်တစုံတခုကိုမှကျူးလွန်ခြင်းမပြုမီ, you can test drive this course and see first-hand the overall value it provides by checking out their အခမဲ့အွန်လိုင်း Demo. This gives you the chance to find out if this course fits well with your personal learning style and preferences.
ဒီတော့ CISA က Super ဆန်းစစ်ခြင်းများအတွက်စျေးနှုန်းအဘယျသို့ဖွင့်? ကောင်းစွာ, ထိုသို့စျေးအကြီးဆုံးမယ်, ထိုသို့ဖြစ်စေဈေးအပေါဆုံးမယ့်. အများဆုံးထုတ်ကုန်များအတွက်, သငျသညျကိုအကောင်းဆုံးတန်ဖိုးမြှ option ကိုစျေးနှုန်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌တစ်နေရာရာမှာအလယ်၌ရှိကြောင်းမကြာခဏရှာတွေ့, ငါဒီမှာအမှုဖွင့်စဉ်းစား.
စုစုပေါင်း package ကိုစျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည် $449.95, နှင့်သည်သင်တို့အဘို့အလုံးကိုသင်ထောက်ကူပစ္စည်းများမှ access ရယူ 180 ရက်ပေါင်းထိုကာလ၌သူတို့ကိုရန်န့်အသတ်လက်လှမ်းမီ. သငျသညျအပိုအဘို့သင်တန်းကိုသုံးနိုင်တယ်တဲ့သင်တန်းကိုအာမခံချက်လည်းမရ6အခမဲ့လအတွင်းသင်အားဖြင့်သင်တို့၏ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပေါ်တွင် CISA စာမေးပွဲဖြေဆိုပျက်ကွက်လျှင်.
အလကား CPE ချေးငွေ
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည် CISA က Super ဆန်းစစ်ခြင်းကိုရွေးချယ်ဖို့အကြီးမားဆုံးအကြောင်းတခုပြီးနောက်သင်သည်သင်၏ CISA စာမေးပွဲဖြစ်ပါသည် (သငျတို့သသွားတော်မူမည်, သို့မဟုတ်အဘယ်ကြောင့် Allen ကအထက်ပြထားတဲ့အာမခံချက်ကိုဆက်ကပ်မယ်လို့?) you will receiveacertificate which gives you 40 ဆက်လက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပညာရေး (CPE) ခရက်ဒစ်. သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် 40 တစ်နှစ်လျှင်ဤသူမခွဲခြားဘဲသင်ရွေးချယ်ပေးသောသင်တန်းကိုသင့် CISA လက်မှတ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့, so choosing this one will save youaTON of time, စွမ်းအင်ကို, နှင့်ငွေသား!
CISA SUPERREVIEW TO GO!
1. စာမေးပွဲ-identity အလေ့အကျင့်စမ်းသပ်မှု
4. အခမဲ့အွန်လိုင်း Demo
ကို http://crushtheinfosecexams.com/wp-content/uploads/2015/05/unnamed-3.png 500 500 ဂျိမ်း Edge ကို http://crushtheinfosecexams.com/wp-content/uploads/2015/09/InfoSec-Logo1-300x41.png ဂျိမ်း Edge2018-04-05 17:08:002018-01-10 22:00:00CISA SuperReview
ExamMatrix CISA ဆန်းစစ်ခြင်း
ExamMatrix CISA ဆန်းစစ်ခြင်း ကျော်ရှိပါတယ် 20 အတွေ့အကြုံနှစ်နှင့်ကုန်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဆန်းသစ်သောနည်းပညာအတွက် CISA ပြန်လည်သုံးသပ်စက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင်. New for this year ExamMatrix CISA is now Surgent CISA Review. Despite it’s new name this course has helped thousands of people pass the CISA exam over the years and if you want to remove all doubts about failing your exam then this is your best bet.
ကို http://crushtheinfosecexams.com/wp-content/uploads/2018/01/surgent-logo.png 73 194 ဂျိမ်း Edge ကို http://crushtheinfosecexams.com/wp-content/uploads/2015/09/InfoSec-Logo1-300x41.png ဂျိမ်း Edge2018-04-05 17:08:002018-03-21 18:00:15ExamMatrix CISA ဆန်းစစ်ခြင်း